Nhau - Chigadzirwa Kurudziro: 6m Hupamhi, Hapana Splicing, Auto Paint Masking Firimu
Qingdao Aosheng Plastic Kambani chigadzirwa chikuru ndeche Auto Paint Masking Firimu, Pre-taped Masking Firimu, Inoraswa Auto Kuchenesa Kits, Kuvaka Firimu, Kudonhedza Sheet / Kudonhedza Mucheka, Pe Plastiki Kurongedza Bhegi, Pepa Yakafanana Masking Firimu, 3 mu1 Yakagadzirwa Masking Firimu, Ruoko Kubvarura Firimu. uye zvimwe zvinoenderana Zvigadzirwa. Mumakore makumi maviri 'tichisimbisa kukura, Aosheng Company rava rimwe pamusoro mugadziri. Nekudaro, kana kambani yedu ikagara munzvimbo imwechete, zvingave nyore kusiiwa nemusika. Nekudaro, kunze kwechinyakare chigadzirwa, Qingdao Aosheng Plastic Kambani iri kurega kuita nhamburiko yekutsvaga zvigadzirwa zvitsva.
Kuti tikwanise kupindura kumusika uye kune vatengi mutero, kambani yedu yakaisa mari muchina mutsva uyo waigona ichivhuvhuta yakafararira saizi, 6m uye hapana splicing, motokari pendi masking firimu. Muchina wedu wechinyakare waigona kungofuridza 5m upamhi. Kana hupamhi hwapfuura 5m, inofanirwa kuita zvidimbu zviviri kusanganisa kuita one. Iyi nzira inopambadza yakawanda kufekitori yedu, uye haina nyore kuti mutengi ashandise. Saka, Qingdao Aosheng Plastic Kambani inodhura yakawanda kugadzira muchina mutsva. Zvino, kusvikira zvino, yechinyakare masking firimu chigadzirwa saizi inogona kushandiswa pamotokari, uye nyowani yekuvhara firimu inogona kushandiswa kuSUV, Bhazi, chikepe uye ndege. Yakasiyana chigadzirwa inogona kusarudzwa nemutengi. Uye panofanira kuve neyaunoda. Nenzira, panguva imwe chete, Kambani yedu yakashandisa iyo yekugadzira mutsara weanoraswa chigaro chevhavha kuti azadzise pamwe nekudiwa kwemota inoraswa chigadzirwa.
Kana mutengi ane chero zano rakanaka kana zvigadzirwa zvitsva, Aosheng angada kuongorora newe pakati pekugona kwedu. Qingdao Aosheng Plastic Company yaizoedza nepese pavanogona kuramba mukuvandudza, kutsvagisa nekuvandudza kusvika kugutsikana kwevatengi. Qingdao Aosheng Plastic Company iri kutarisira kushandira pamwe nemi. Kana iwe uine chero mubvunzo, usazeze kutiudza isu.